ဘုရားရှိသလား? အပိုင်း (၁) | New Light Myanmar
ဘုရား အမှန်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်ဖို့ ရှင်းလင်းတိကျသော အကြောင်းပြချက်များ(၆)ချက် ပြောပြပါမယ်။ -- မေရီလင်းအာဒမ်ဆင်ထံမှ
(၁) ဘုရားတည်ရှိပါသလား? - ကျနော်တို့ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့နက်နဲရှုပ်ထွေးမှုဟာ ကျနော်တို့စကြာဝဠာကြီးကို ဖန်ဆင်းရုံမက ဒီနေ့ထက်ထိထိန်းချုပ်နေတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပုံစံပြုသူတစ်ဦးရှိနေမှန်း ညွှန်ပြနေပါတယ်။
ကမ္ဘာမြေကြီး - အရွယ်အစားက တကယ့်ကို ကွက်တိပါ။ ကမ္ဘာ့အရွယ်အစားနဲ့ သူနဲ့လိုက်လျောညီထွေတဲ့ ဆွဲအားက နိုက်ထရိုဂျင်နဲ့ အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့၊ ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်အထက် မိုင် ၅၀ ခန့်သာကျယ်တဲ့ အလွှာပါးပါးလေးကို ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ ကမ္ဘာမြေ ဒီ့ထက်ပိုငယ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာ့လေထုဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ၊ မာကျူရီဂြိုဟ်လိုပေါ့။ ဒီ့ထက်ပိုကြီးမယ်ဆိုပြန်ရင်လည်း ကမ္ဘာ့လေထုမှာ သီးခြားဟိုက်ဒရိုဂျင် (ဟိုက်ဒရိုဂျင်သီးသန့်) တွေ ပါလာပြန်တော့မယ်။ ဂျူပီတာဂြိုဟ်လိုပေါ့။၃ ကမ္ဘာဂြိုဟ်သာလျှင် ဓာတ်ငွေ့အချိုးအစားမျှတစွာ ပေါင်းစပ်ထားသောလေထုရှိတဲ့ တစ်ခုတည်းသောဂြိုဟ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီလေထုကမှ အပင်၊ တိရိစ္ဆာန်နဲ့ လူ့အသက်ကို ရှင်သန်စေနိုင်တာလေ။
ကမ္ဘာမြေဟာ နေနဲ့ တော်လျော်တဲ့အကွာအဝေးကနေ တည်ရှိနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ရရှိတဲ့ အပူချိန်လွှဲတွေကို တွက်ဆကြည့်ပါ၊ အကြမ်းဖျင်း -၃၀ ဒီဂရီကနေ +၁၂၀ ဒီဂရီထိရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ ကမ္ဘာမြေသာ နေလုံးကနေ အနည်းငယ် ဝေးကွာမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့အားလုံး အေးခဲသွားကုန်မယ်။ အနည်းငယ် နီးကပ်ပြန်မယ်ဆိုလည်း အားလုံးပြာကျကုန်မယ်။ နေကနေ ကမ္ဘာမြေရဲ့အနေအထား အနည်းငယ် တိမ်းစောင်းသွားတာနဲ့တောင် ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ သက်ရှိဆိုတာ ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာမြေဟာ နေနဲ့ အံကိုက်အကွာအဝေးမှာ ရှိနေပြီးတော့ နေပတ်လမ်းကြောင်းအတိုင်း တစ်နာရီ ၆၇၀၀၀ မိုင်နှုန်းနဲ့ ရွေ့လျားလည်ပတ်နေတာပါ။ ပြီးတော့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး သင့်တင့်စွာ ပူနွေးစေရန်၊ အေးမျှစေရန် သူ့ဝင်ရိုးပေါ်တည်ပြီး လည်ပတ်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ လဟာလည်း အရွယ်အစား အံကိုက်ရှိပြီး ကမ္ဘာမြေကနေ ဆွဲအားအတိုင်း ကွက်တိအကွာအဝေးမှာ ရှိနေပါတယ်။ လဟာ ပင်လယ်ရေတွေ တန့်မနေအောင် လိုအပ်တဲ့ ဒီရေအတက်အကျတွေကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ဒီရေလှိုင်းလုံးတွေ ကမ္ဘာ့ကုန်းတွင်းပိုင်းတွေပေါ်အထိ ဖိတ်စင်ထိုးတက်မသွားအောင် ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။
ရေ - အရောင်မဲ့၊ အနံ့မဲ့၊ ပြီးတော့ အရသာမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေမပါဘဲ ဘယ်သက်ရှိမှ မရှင်သန်နိုင်ပါဘူး။ အပင်တွေ၊ တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ လူသားတွေဟာ အဓိကအားဖြင့် ရေနဲ့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ (လူ့ခန္ဓာ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်ဟာ ရေပါ။) ရေရဲ့ထူးခြားသော လက္ခဏာတွေဟာ အသက်နဲ့ ဘာကြောင့်ထူးခြားစွာ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်ရသလဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်။ ရေမှာ တမူထူးခြားစွာ ရေဆူမှတ်ထိဆူပွက်နိုင်ပြီး ရေခဲမှတ်ထိလည်း အေးခဲနိုင်ပါတယ်။ ရေဟာ ကျနော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန် ပုံသေ ၉၈.၆ ဒီဂရီမှာ ထိန်းပေးထားပြီးတော့ အပူချိန်အတက်အကျ ပြောင်းလဲနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေထိုင်အသက်ရှင်စေပါတယ်။ ရေဟာ အကန့်အသတ်မဲ့ဖျော်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ “ရေ” ဆိုတဲ့ပစ္စည်းဟာ လိုအပ်တဲ့ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ သတ္တုဓာတ်နဲ့ အာဟာရဓာတ်များကို ကျနော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ သယ်ဆောင်နိုင်ပြီး အသေးမွှားဆုံးသောသွေးကြောများထဲထိ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရေဟာ ဓာတုဗေဒသဘောအရ အာနိသင်မဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူသယ်ဆောင်တဲ့ အစာ၊ ဆေးနဲ့ ဓာတ်ဆားရည်များကို ခန္ဓာကိုယ်က စုပ်ယူအသုံးပြုနိုင်အောင် အာနိသင်မပျောက်မပျက် သယ်ဆောင်ပေးပါတယ။်
ရေမှာ ထူးခြားတဲ့ ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်အားပြိုင်မှုဂုဏ်သတ္တိ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာ့ဆွဲအားကိုဆန့်ကျင်ပြီး အပင်တွေထဲကနေ အသက်ရှင်သန်စေတဲ့ ရေနဲ့အာဟာရတွေကို သယ်ဆောင်ပြီးတော့ အမြင့်ဆုံးသစ်ပင်များထိပ်ဆီကို စီးတက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရေဟာ အထက်ကနေအေးခဲပြီး ပေါလောပေါ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငါးတွေ ဆောင်းတွင်းမှာ အသက်ရှင်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမြေရဲ့ရေ ၉၇%ဟာ သမုဒ္ဒရာထဲမှာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ကုန်းမြေပေါ်မှာ ရေထဲကနေ ဆားကိုစစ်ထုတ်ပြီးတော့ တကမ္ဘာလုံးဆီသို့ ရေဖြန့်ဝေပေးတဲ့စနစ်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ အငွေ့ပျံခြင်းက ပင်လယ်ရေတွေကို ယူဆောင်တယ်၊ ဆားတွေကို စစ်ချထားတယ်၊ ပြီးတော့ တိမ်တွေကို ဖွဲ့ပေးတယ်။ အဲဒီတိမ်တွေကို လေကသယ်ဆောင်ပြီးတော့ အသီးအနှံ၊ တိရိစ္ဆာန်နဲ့ လူတွေအတွက် ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်တခုလုံးဆီကို မိုးရေအဖြစ်နဲ့ ပြန်လည်ဖြန့်ချရွာသွန်းပေးတယ်။ အဲဒါဟာ ဒီကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်က သက်ရှိအားလုံးကို ရှင်သန်လည်ပတ်စေတဲ့ သန့်စင်ပေးခြင်းနဲ့ ထောက်ပံ့ခြင်းစနစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေ ပြန်လည်စစ်ချခြင်းနဲ့ ပြန်လည်သုံးစွဲခြင်းစနစ် ဖြစ်ပါတယ်။
လူ့ဦးနှောက် - သတင်းအချက်အလက် အံ့ဖွယ်မြောက်များစွာကို တပြိုင်နက်တည်းမှာ စဉ်းစားလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ဦးနှောက်က သင်မြင်တွေ့သမျှ အရောင်များနဲ့ ဝတ္ထုများ၊ သင့်ဝန်းကျင်အပူချိန်၊ ကြမ်းပြင်ပေါ်က သင့်ခြေထောက်ရဲ့ဖိအား၊ ပတ်ဝန်းကျင်အသံဗလံများ၊ သင့်ရဲ့ အာခေါင်ခြောက်သွေ့မှု၊ ပြီးတော့ သင့်ကွန်ပျူတာကီးဘုတ် အထိအတွေ့များကိုပါ ယူမှတ်သိုမှီးထားပါတယ်။ သင့်ဦးနှောက်က သင့်စိတ်ခံစားမှုတွေ၊ အကြံအစည်တွေ၊ မှတ်ဉာဏ်တွေအားလုံးကို ထိန်းချုပ်ပြီး စနစ်တကျလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ သင့်အသက်ရှူနည်းပုံစံ၊ မျက်ခွံလှုပ်ရှားမှု၊ ဆာလောင်မှု၊ လက်ဖဝါးပေါ်ကကြွက်သားများရဲ့လှုပ်ရှားမှုအစရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဆောင်ရွက်နေဆဲလုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းများကို မှတ်သားပေးထားပါတယ်။ လူ့ဦးနှောက်ဟာ တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာ တစ်သန်းထက်မက သတင်းအချက်အလက်များကို စဉ်းစားလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။၇ သင့်ဦးနှောက်က ဒီအချက်အလက်တွေအားလုံးရဲ့ အရေးကြီးမှုတွေကို ချင့်ချိန်ပြီးတော့ သိပ်အရေးမကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေကို စစ်ထုတ်ပါတယ်။ အဲဒီ စစ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းဟာ သင့်ကို အာရုံစူးစိုက်ပြီးတော့ အလုပ်မှာ ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ခွင့်ပြုတဲ့အရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ဟာ တခြားကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများနဲ့ မတူ တမူထူးခြားစွာ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ကို နက်နဲသောဉာဏ်ပညာနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဆင်ခြင်စဉ်းစားနိုင်စွမ်း၊ ခံစားချက်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း၊ ကြံစည်စီစဉ်နိုင်စွမ်း၊ ကြံစည်စီစဉ်တဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၊ ပြီးတော့ အခြားသူများနဲ့ ဆက်ဆံနိုင်စွမ်း စတာတွေ ပါရှိပါတယ်။
မျက်လုံး - အရောင်အသွေး (၇)သန်းမျှကို ခွဲခြားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ သူ့မှာ အလိုအလျောက် ဗဟိုပြုနိုင်စွမ်းရှိပြီးတော့ တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ အရာဝတ္ထု ၁.၅ သန်းမျှကိုပင် ခြုံငုံထားနိုင်ပါတယ်။၈ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဟာ တည်ဆဲဇီဝရုပ်များအတွင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့ (သို့) တည်ဆဲဇီဝရုပ်များမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သန္ဓေပြောင်းလဲခြင်းကိုသာ အာရုံစိုက်လေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတောင် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်က မျက်လုံးနဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ ကနဦးရင်းမြစ်ကိုတောင် လုံးစေ့ပတ်စေ့ ရှင်းမပြနိုင်ပါဘူး။ သက်မဲ့ဝတ္ထုထဲက သက်ရှိဇီဝရုပ်တွေရဲ့ အစကိုလေ။